नेपाली काग्रेसद्धारा राप्ती गाउँपालिकाको ४ वडामा अध्यक्षको नाम सिफारिस – Bihani Online
नेपाली काग्रेसले राप्ती गाउँपालिकाको ४ वटा वडामा वडा अध्यक्षको नाम सिफरिस गरेको छ ।जस अनुसार वडा नं. ५ को वडा अध्यक्षमा कालापानीका गोर्वधन रावत, सदस्यहरुमा गणेश चौधरी, भानु चौधरी, शिवा भट्टराई, शारदा परियार वडा नं. ६ को वडा अध्यक्षमा सगरापुरका वेदप्रसाद चौधरी, सदस्यहरुमा
कृष्णकुमार चौधरी, पुरन चौधरी, तारा चौधरी वडा नं. ७ को वडा अध्यक्षमा बड्का सिसहनियाँका विद्याशरण चौधरी, सदस्यहरुमा भिमलाल चौधरी, नित्यानन्द शर्मा, शान्ति चौधरी, उमा परियार र वडा नं. ८ को वडा अध्यक्षमा पिपरीका शिवध्वज मल्ल, सदस्यहरुमा तापेश्वर चौधरी, तारा घिमिरे, विन्दु चौधरी, मालती छिनालको नाम सिफारिस गरिएको नेपाली काग्रेसले जनाएको छ ।
यसै बिच गाउँपालिकाका लागि नेपाली काग्रेसबाट अध्यक्ष पदका लागि ने पाली कांग्रे सबाट युवराज न्यौपाने, हरि भुसाल, लालमोहम्मद मियाँ,द्रो ण भुसाल,नुमानन्द सुवे दीको नाम चर्चामा छ । त्यस्तै महिला उपाध्यक्षमा नेपाली काग्रेसबाटै जगदम्बा चौधरीको नाम चर्चामा रहेको पाइएको छ ।
ने कपा एमाले बाट अध्यक्ष पदका लागि सूर्यप्रकाश शर्मा, किर ण भण्डार ी, शो भाकर भुसालको नाम चर्चामा छ । त्यस्तै ने कपा माओ वादी के न्द्रबाट अध्यक्ष पदका लागि धर्मर ाज अधिकार ी, श्यामे स चौ धर ी, अर्जुन अधिकार ी, प्रकाश विष्ट, टोपबहादुर कार्की, ऋषि पौडेलको नाम चर्चा मा रहेको छ ।
र ाष्ट्रिय जनमो र्र्चा िभत्र आकांक्षीहरु बढी भए पनि नर बहादुर के सीको नाम चर्चामा रहेको पत्रकार ओमप्रकाश गुप्ताले जानकारी दिनु भएको छ ।
ओली सरकार टिकाउन र हटाउन जसपा निर्णायक हुने